Ungamisa kanjani lactation?
Ngezizathu ezihlukahlukene, ngokuvamile ezingaphezu kokulawula kowesifazane, kufanele aphazamise noma ayeke ngokuphelele ukuncelisa. Into eyinhloko ukwazi ukuthi ungamisa kanjani i-lactation ukuze ugweme izinkinga ezingenzeka.
Izizathu zokuyeka ukuncelisa ingane kungase kube okuningi - ukuxoshwa emathunjini, ukugula noma ukuphoqeleka isikhathi eside komama nabanye abaningi. Isisekelo sokuqedela i-lactation sinqunywa ngesivinini sokumiswa kwayo, ngoba le nqubo ingamiswa kokubili ngokushesha futhi kancane kancane, kancane kancane.
Ngokuvamile, ukuqedwa kwe-lactation kungenxa yokuthi ingane ikhule. Kudingekile ukuthi usebenzise izinyathelo zokufakelwa lapho umntwana engasetshenziswanga ukuthola ngaphandle kwebele ngisho nokufakwa kokudla okuhambisanayo. Ngezinye izikhathi isimo siqala ngendlela yokuthi umama adinga ukuthatha imithi, ukwemukelwa okungafaki ukuncelisa, noma le mithi kusiza ukuyeka ukukhiqizwa ubisi. Uma umama ongumhlengikazi ephoqeleka ukuba aye esibhedlela, kudingeka futhi azi ukuthi angamisa kanjani ukudlala ngendlela ephephile.
Ukuqedwa kwe-lactation. Sisebenzisa izindlela ezifakazelwe
Kunezindlela eziningi zokuyeka ukuncelisa. Nakhu okuphumelela kakhulu.
Iningi lazo liqukethe ihomoni elinciphisa umsebenzi we-lobe yangaphakathi ye-pituitary gland. Isikhathi sokuthatha izidakamizwa ezinjalo singasuka ngosuku olulodwa kuya emavikini amabili. I-Bromkampora ibhekwa njengendlela ephumelela kakhulu yokuvimba ukhiqizwa ubisi. Lawa amaphilisi aqinisekisa ukuphela kokulahlwa ngesikhathi esifushane, futhi, ngaphezu kwalokho, banemiphumela emibi kakhulu (ehlukanisa nabo kwezinye izinhlaka). Izidakamizwa eziningi ezisiza ukuyeka ukukhwabanisa, zithinte ubuchopho futhi zibe nohlu oluhlaba umxhwele lwezingqinamba nemiphumela emibi. Ngakho-ke, ukubonisana kokuqala nodokotela kuyisidingo sokwamukelwa kwabo. Uma kunezibonakaliso zenqubo esithathelwanayo esifubeni (isisu), kunconywa ukuthi owesifazane masinyane ayeke ukuncelisa, lapho amaphilisi e-lactation asiza khona.
Izindlela zokwelapha zomphakathi ezithinta ekuqedeni ukukhiqizwa ubisi
Kufanele zisetshenziswe uma zingekho izinkinga zesifuba, azikho izimboni kanye nezinzwa ezibuhlungu. Udinga nje ukulalela umzimba wakho siqu, ngoba ukusabela kwawo kuyisibonakaliso esihle kakhulu sokusebenza komuthi othile. Uma ungazi ukuthi ungamisa kanjani ukudlala, ukupheka okulandelayo kuzosiza:
Ukuthatha ukumnika okuvela emakhambi okudonswa, okusiza ukuqeda uketshezi okweqile, okuholela ekunciphiseni ukwenziwa kwe-lactation nokuqedwa kwayo kancane kancane. Inkambo yokwamukelwa igcina, njengomthetho, amasonto amaningana. Kodwa-ke, kakade ngosuku lokuqala lokusebenzisa ukumnika okufanelekile, umuntu angase abe nomuzwa wokuthi isifuba sesifinyelele. Okuphumelela kakhulu yizo utshani ezifana nebhereberry, i-basil, i-cowberry, i-parsley engadini, i-elecampane, i-wise, i-mint. Inani eliphakanyisiwe lokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa lingama-glasses ayisithupha nsuku zonke.
Ukusebenzisa iqabunga iklabishi esibelethweni. Lokhu kufanele kwenziwe ngokushesha ngemuva kokudla (noma ukunciphisa). Sebenzisa iklabishi kuzo zombili amabele, amashidi aphekwe ngaphambili ukuze ubanike ifomu elincane. Ngaphambi kokufaka isicelo, ungabamba iklabishi encane efrijini, i-compress enjalo izosiza ngokuvuvukala. Inqubo ingagcwaliswa lapho amaqabunga eklabishi ehlambalaza. Le ndlela yokuyeka ukuncelisa ukubeletha yimbi ende, kodwa futhi inemvelo kakhulu futhi iphephile.
Ukunciphisa kancane kancane kwenani lokuphakelayo. Kulesi simo, inani lobisi elizokhiqizwa lizokwehla kancane kancane. Uma kunzima futhi umuzwa wokugcwalisa esifubeni, udinga ukuveza ubisi oluncane.
Ungamisa kanjani ukulahla, kufike kuwe. Kodwa-ke, ungayinaki usizo lochwepheshe, uma le nqubo ihambisane nezidumbu esifubeni, ubomvu nomkhuhlane - izibonakaliso ezifanele ze-mastitis ne-lactostasis.
Umama. Kungcono kunini ukuzala futhi kungani?
Ukuya ocansini emva kokubeletha kuyinkinga engenasifo noma imibala emisha ekuphileni kwabazali abasha?
Uneminyaka emingaki ukuthatha kungaba amaprotheni. ezemidlalo kwansuku
Rest okunonya phezu iVolga. Nezokungcebeleka lomfula